Waxa la sheegay in hal malin lagu laayay in ka badan 60 qof bariga gobolka welega ee dagmada kiraamu - ዜና ከምንጩ
Deegaanka oromada gobolka wuqooyiga welega dagmada kiraamo magalada addis alem ayaa kooxda lagu magacabay in ay yihiin argagaxiso ee shane oo hubaysan ay hal malin ku laysay in kabadan 60 qof oo rayid ah, waxaana arintan wargayska addis maleda u waramay dad halkaasi ku nool oo goob joogayaal ah.
Waxa ay shegeen dadkii halkaasi daganaa in liyu booliski halkaasi dagana laga saaray si aanay dadka u ilaalinin, waxa kale oo ay yidhadeen anaga oo aan ilaalo haysaninna side baan dhimashada uga badbaadayna, waxa ay laayaan dadka raydka ah marka liyu bolisku u halkaasi ka baxay.
Sida uu wargayska addis maleda ka soo ogaaday dadkii halkaasi ku noola in isniinti aan soo dhaafnay ee meskerem 30keedi 2014kii in la laayay in kabadan 60 qof oo rayd ah oo uu dhashay qoomiyada amxarada, waxana laysay kooxda onag shane. Waxaana dadkaasi lagu laayay dagmada kiraamu magalada haro addis alem xili laga saaray agagaarkaasi liyu booliskii halkaasi ilaalinayay.
Waxa kale oo ay sheegen dadki halkaasi dagana in booliski halkaasi joogay ay ka baxeen meeshaasi ayada oon wax rasaas ah aan la ridin taasina waxa ay ka dhigantahay in dadka halkaasi dagan loogu talo galay in la laayo.
Ilaahay baa na badbaadiyay oo untii aan xabadihi la bilaabin ka hor ayaan halkaasi ka baxnay oo waxa aan ku dhuumanayna duurka dhaxdiisa. Intii aan la bilaabin xabadaha la ridayo ka hor meskerem 29keedi 2014kii habeenimadi sabtidi ayaa booliska gaarka ah ee oromiya laga saaray halkaasi.
Sida ay sheegen oo kale waxa booliska gaarka ah halkaasi looga saaray dadkii hadhay ee dhimashada ka badbaaday si loo dhameeyo. Kooxdaasi hubaysan waxa ay dadkaasi soo weerareen xili ay suuq fadhiyen.
Wuqooyiga welega agagaarkeeda waxa la sheegay in aanay jiri wax la cuno iyo wax yaabaha kale ee asaasiga ah, dadkii halkaasi ka bixi kariwayay ee waayeelka ahaa iyo caruurtii way gaajoonayaan. Waxa kale oo ay sheegeen in kuwi halkaasi ka cararay ee duurka ku jirayna ay sida oo kale gaajoonayaan oo aanay haysanin wax ay cunaan.
Dadkii halkaasi dagana mid ka mid ah oo aan rabin in aan magaciisa la sheego ayaa yidhi sadex malmood waxba ma cunin waxa aan ka cararay halkaasi oo waxa aan ku jira duurka. Dad beero lay ahna waxa lagu laayay rasaas, haween iyo caruur yaryarna caloosha ayaa laga dooxay ayaga oo maydkoodu uu meel kasta yaalo ayaan soo arkay.
Waxa kale oo la sheegay in kooxda hubaysani aanay doonayn in dadka u dhashay qoomiyada amxaaradu ay ku nooladaan deegaanka oromiya. Hadii aan la dagalami lahayna wax hub ma haysano bay yidhaahdeen. hadii cidanku na cawin lahaana meeshaba wax ciidan ahi ma joogaan. Dad tiro badan oo rayid ah ayaa halkaasi lagu laayay. Intayada hadhayna waxa aan rajo ka suugaynauun dawlada.
Sida u wargayska addis maleda uu soo ogaadayna dadkii ku dhuumanayay duurka si aanay ugu qaxin meelaha ay jaarka la yihiin waxa halkaasi ku gooban kooxdaasi sidaasi darted waxa aan ku dhuumanaynaaun halkaasi.dhinac kasta waa nalaga soo weeraray. Intii dhimatayna way dhimatay intayadi hadhayna waxa aan suugayna uun dawlada.
Haweenkii iyo caruurti yaryareed ee socon kari waydayna waxa lagu gawr gawracay halkii ay joogeen oo maydkooduna waxa u yaala meel kasta.sida ay sheegeen dadkii halkaasi dagana kooxdaasi argagaxisada ah ee shane dadka u dhashay qoomiyada amxaarada ee hakaasi dagan in guryahooda ama meesha ay daganyihiin ka soo baxaanna uma ogola oo waxa ay ku hayaan halkoodi si khasb ah.
Sida ay sheegeen dadkii uu waramay wargayska ilaa iyo xiligan xaadirka ah in weerarkii lagu soo qaadayay aanu joogsan oo ay kari waayeen xita in maydadkooda ay aastaan oo tirade dadka halkaasi lagu laynayaana aan la garanayn.
Wargayska addis maleda ayaa isku dayay in uu ka waraysto arintan madaxa xidhiidhka arimaha dawlada ee deegaanka oromiya mudane Haylu Adhuunya waxana uu wargaysku kula xidhiidhay tilifoon balse tilifoonki ayaa laga qaban waayay sidaas darted wax xog ah oo ku saabsan arintani wuu heli kari wayay wargaysku.
Waxa xusid mudan in wargayska addis maleda uu marar badan ka soo waramay arinta dadka rayidka ah ee lagu laayay wuqooyiga gobolka welega iyo in dad badan ay halkaasi ka barokaceen oo ay si nabadgalyo ahna u dhaqdhaqaaqi kari waayeen.
Total views : 7512065